11-28-2012 07:07 PM #1
Thanked 1,969 Times in 444 Posts
ဒီနေရာလေးမှာ ဖိုရမ်အတွက် ဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်းကို update လုပ်ပေးသွားပါမယ်။
ကို pigkalay မှ S$20 လှူဒါန်းပါတယ်။ (28/11/12)
နောက်ပြီးတော့ ဖိုရမ်မှာ ကြော်ငြာအတွက် S$150 လဲ လက်ခံရရှိထားပါတယ်။
စုစုပေါင်း S$170 လက်ခံရရှိထားပါတယ်။
The Following 14 Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
astar, hninn nu, Htet Soe Paing, Little3278, luhein25, NayNyo, phoelapyae, phyo, pigkalay, tunaungkyaw, usser, William Paul, yanng07, ကိုထွန်း
01-03-2013 06:36 PM #2
astar မှ SG$ 10 လှူဒါန်းပါတယ်။
စုစုပေါင်း SG$ 180 လက်ခံရရှိထားပါတယ်။
အခုလှူဒါန်းတဲ့အတွက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်လှူဒါန်းမယ့် အလှူရှင်များကိုလဲ စောင့်မျှော်နေပါတယ် ခင်ဗျ...
The Following 10 Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
astar, chit tee, hninn nu, htinlin, kosaw, phoelapyae, pigkalay, William Paul, ကိုထွန်း, ဂျာအေး
01-07-2013 07:34 AM #3
Originally Posted by ချင်းတွင်းသား
အချို့ကြော်ငြာရှင်တွေအတွက် ကြော်ငြာဆောင်းပါးရေးပြီးတင်ပေးမယ်ဆိုလျှင်ရော အလှူငွေရနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ နည်းပညာသုံးတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသစ်အကြောင်း စတဲ့ ဘောင်တစ်ခုထဲဝင်နေလျှင် (ဥပမာ Solar system, Battery နဲ့ Inverter တွေ၊ Water pump, Compressor နဲ့ Welding machine များ၊ Soft starter and Frequency drive) စတာမျိုးတွေဖြန့်ချိရောင်းချလိုသူတွေအတွက် အလုပ်အပ်မယ်ဆိုလျှင် ဖိုရမ်အလှူငွေရအောင် ကြိုးစားရေးကြည့်ချင်ပါတယ်။
အေ၇ာတို့ကြိုးပမ်းနေမှာထက် အဆင်ပြေပြေရေးနိုင်တဲ့သူတွေကလည်း ရေးပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်အားထားမိပါတယ်။
(စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာဖို့ ခေါင်းလောင်းမဟာ ရှာကြစို့)
The Following 12 Users Say Thank You to အေ၇ာ For This Useful Post:
chit tee, hninn nu, kosaw, phoelapyae, phyo, pigkalay, tunaungkyaw, William Paul, ကိုထွန်း, ချင်းတွင်းသား, သိုးကျောင်းသား, နေမင်းသွေး
02-27-2013 03:33 PM #4
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့ က ဒိုမိန်းအတွက် USD 80 သွင်းလိုက်ပါတယ်။
နောက်လတွေအတွက် carry USD 60 ကျန်ပါသေးတယ်။
လက်ထဲမှာတော့ SGD 77.34 ကျန်ပါသေးတယ်။
လက်စနဲ့ ပြောချင်တာက ဖိုရမ်အတွက် paypal ကနေ လှူချင်တယ်ဆိုရင် kophyolwin@gmail.com သို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
အရင် တစ်ခါဖိုရမ်အတွက်လုပ်ထားတဲ့ အကောင့်က ဘဏ်ကဒ်က နာမည်နဲ့ လွဲနေလို့ ကျွန်တော့်ဘဏ်အကောင့်ကနေ paypal ကို top up လုပ်မရတာနဲ့ တခြားအီးမေးနဲ့ ထပ်လုပ်လို့ ပါခင်ဗျာ...
The Following 13 Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
astar, chit tee, hninn nu, johnmoeeain, kosaw, phoelapyae, phyo, pigkalay, tunaungkyaw, William Paul, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး, အေ၇ာ
02-28-2013 03:41 PM #5
Originally Posted by အေ၇ာ
ဖိုရမ် အလှူငွေရနိုင်မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ အသေးစိတ်တွေကိုတော့ အားလုံးညှိပြီးလုပ်ရမှာပေါ့။
The Following9Users Say Thank You to tunaungkyaw For This Useful Post:
hninn nu, Jame Ranchochondras, kosaw, phoelapyae, phyo, pigkalay, William Paul, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး
03-02-2013 08:05 AM #6
johnmoeeain မှ ဖိုရမ်ဒိုမိန်းအတွက် အလှူငွေ SG$50 လှူဒါန်းသွားပါတယ်။
လက်ထဲမှာ စုစုပေါင်း SG$127.34 ရှိပါတယ်။ mediatemple မှာ ပိုငွေ USD 60 ကျန်ပါသေးတယ်။
အခုလို လှူဒါန်းသော johnmoeeain အား မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း....
The Following 16 Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
astar, chit tee, hninn nu, Jame Ranchochondras, johnmoeeain, kosaw, NayNyo, phoelapyae, phyo, pigkalay, tunaungkyaw, William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး, အေ၇ာ
03-11-2013 11:27 AM #7
aster မှ SG$ 25 လှူဒါန်းသွားပါတယ်။
လက်ထဲမှာ စုစုပေါင်း SG$152.34 ရှိပါတယ်။ mediatemple မှာ ပိုငွေ USD 60 ကျန်ပါသေးတယ်။
အခုလို လှူဒါန်းသော aster အား မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း....
astar, chit tee, hninn nu, Jame Ranchochondras, johnmoeeain, kosaw, NayNyo, phoelapyae, pigkalay, tunaungkyaw, William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး
04-01-2013 09:04 AM #8
Archimedes မှ SG$ 50 လှူဒါန်းသွားပါတယ်။
လက်ထဲမှာ စုစုပေါင်း SG$202.34 ရှိပါတယ်။
အခုလို လှူဒါန်းသော Archimedes အား မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
The Following 12 Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
astar, chit tee, hninn nu, Jame Ranchochondras, kosaw, NayNyo, phoelapyae, pigkalay, William Paul, yeakharr, ကိုထွန်း, အေ၇ာ
04-08-2013 04:03 PM #9
aster မှာ SG$5 ထပ်မံလှူဒါန်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ...
လက်ထဲမှာ စုစုပေါင်း SG$207.34 ရှိပါတယ်။
အခုလို လှူဒါန်းသော aster အား မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Last edited by ချင်းတွင်းသား; 05-21-2013 at 05:23 PM.
astar, chit tee, hninn nu, htinlin, Jame Ranchochondras, phoelapyae, William Paul, yeakharr, zinmaung, ကိုထွန်း
05-21-2013 05:44 PM #10
ဒီကနေ့ ပဲ MediaTemple ကို Hosting အတွက် USD 60$ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်က USD 80$ သွင်းထားတာက
09/02/2013 - 08/03/2013 USD20
09/03/2013 - 08/04/2013 USD20
09/04/2013 - 08/05/2013 USD20
09/05/2013 - 08/06/2013 USD20
အတွက်နုတ်နုတ်သွားတော့ Balanced မှာ0ဖြစ်သွားပါဘီ။
သတိရတုန်းလေး ဒီနေ့ နောက်ထပ် USD 60 $ ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ထဲမှာ 129.20SG$ ကျန်ပါသေးတယ်။
The Following 11 Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
astar, chit tee, hninn nu, htinlin, Jame Ranchochondras, kosithuag, phoelapyae, yeakharr, ကိုထွန်း, သိုးကျောင်းသား, အေ၇ာ
Quick Navigation အသိပေးချက်များ Top
All times are GMT +6.5. The time now is 11:12 PM.